Imigangatho ephezulu yeGramatical 25
Iimpawu kunye nezenzi , ilizwi elisebenzayo kunye nelizwi, izinto ezichanekileyo nezingangqaliyo, iziqulatho kunye nezivakalisi eziyinkimbinkimbi : mhlawumbi uvile le migomo ngaphambili. Abanye usakhumbula, kwaye abanye-kakuhle, abanye abanokuba bajwayelene nawe njengokuba babehlala bekhona. Ukuba unesimo sengqondo sokubhukuda kwigrama yakho, eli phepha likulo: iinkcazo ezimfutshane kunye nemizekelo yeemeko eziqhelekileyo zegrama.
Into endiyayaziyo ngegrama kukuba namandla angapheliyo. Ukutshintsha isakhiwo sesivakalisi sitshintsha intsingiselo yesi sigwebo.
Indlela yokuhlaziya iMigqaliselo yeGrama yeGrafti
Ukuba ufuna ukufunda okunye malunga nale migaqo, nqakraza igama ukutyelela iphepha lephepha. Apho uya kufumana inkcazelo eyandisiweyo kunye nemimiselo emininzi, kunye neengqungquthela kumanqaku ahlolisisa iingcamango ezinxulumene negrama ngokubanzi.
Beka ezi ngcamango ukusebenzela iziseko zezivakalisi ezibalulekileyo .
Igama lokulumkisa: ukufunda (okanye ukufikelela) le migama yegrama ayiyi kuyenza ubhale umbhali ongcono. Kodwa ukuphonononga le migqaliselo kufuneka kuphucule ukuqonda kwakho indlela amagama ahlelwe ngayo ngesiNgesi ukudala izivakalisi. Kwaye okokuqonda kufuneka ekugqibeleni kukuncede ube ngumlobi onokuzithemba kwaye othembekileyo.
Izwi elisebenzayo luhlobo lwesigwebo okanye isigatya apho isihloko senza okanye senza isenzo esibonakaliswe ngesenzi. Ukungafani neLizwi eliPhezulu .
(Jonga kwakhona: Yenza inxaxheba kwiinguqu zokutshintsha ukusuka kwi-Passive ukuya kwi-Active .)
"Uthabatha wabalobi wazama ukumvavanya.
Ndadla isibindi sakhe kunye neembotyi ze-fava kunye ne-Chianti enhle. "
(Hannibal Lecter kwi -Silence of Lambs , 1991)
Isichazi siyinxalenye yentetho (okanye igama leklasi ) eliguqulela isibizo okanye isibhengezo .
(Jonga kwakhona: Ukongeza iIjlomelo kunye neZilumkiso kwiYunithi yesiGwebo esisisiseko .)
"Thumela le ndyikitya yokufa, i-traitor, inkomo yenkomo, isicatshulwa esicwebileyo kwi-brig."
(Jack Sparrow kwiiPirate zeCaribbean: Ekupheleni kwehlabathi , 2007)
Isibhengezo siyinxalenye yentetho eguqula isenzi, isichazi, okanye esinye isibhengezo.
(Qwalasela kwakhona: Yenza umsebenzi kwi-Turning Adjectives kwiingcebiso .)
"Ndikho apho, ndimi apho ecaweni, kwaye ngokokuqala ngqa ebomini bam bonke ndaqonda ukuba ndamthanda nomntu omnye."
(UCharles waya kuCarrie kwiMitshato emine kunye noMngcwabo , ngo-1994)
Isigatshana liqela lamazwi equle isifundo kunye nesiqendu . Isigatshana sinokuba isivakalisi ( isigatya esizimeleyo ) okanye isakhiwo esifana nesigwebo esifakwe kwisinye isigwebo (oko kukuthi, isigatya esisekelwe phantsi).
" Musa ukuphikisana nenja enkulu [ icandelo elizimeleyo ], kuba inja enkulu ihlala ilungile [ isigxina esisekelwe phantsi ]."
(USekela uMarshal Samuel Gerard kwi -Fugitive , 1993)
Isivakalisi esiyinkimbinkimbi sisivakalisi esineqendu elilodwa elizimeleyo kunye nesigatya esisigxina esisodwa.
(Qwalasela kwakhona: UkuTyekiswa kokuTyala-UkuThengisa: IziGulana eziPhezulu .)
" Musa ukuphikisana nenja enkulu [ icandelo elizimeleyo ], kuba inja enkulu ihlala ilungile [ isigxina esisekelwe phantsi ]. "
Isivakalisi sesiqulatho sisivakalisi esibandakanya ubuncinane amabini amabakala ahlukeneyo, ahlala ehlanganiswe ngokubambisana .
(Jonga kwakhona: UkuTyekiswa kokuTyala-UkuThengisa: Izivakalisi eziNinzi .)
" Andikwazi ukukhuphisana nawe [ icandelo elizimeleyo ], kwaye awufanelanga ubuchopho bam [ isigatya esisigxina ]. "
(Vizzini kwi -Princess Princess , 1987)
Ukubambisana yinxalenye yentetho ekhonza ukudibanisa amagama, amabinzana, iigatya, okanye izivakalisi.
(Bona kwakhona: ukudibanisa ngokubambisana , ukuxhasana ngokubambisana , ukudibanisa kunye kunye nesibhengezo esihlangeneyo .)
"Andikwazi ukukhuphisana nawe ngokwenyama, kwaye awufanelanga ubuchopho bam."
Isivakalisi esichazayo sivakalisi esenza ingxelo.
(Jonga kwakhona: Yenza umsebenzi wokuQinisekisa izivakalisi .
" I-taker taker yazama ukumvavanya. Ndadla isibindi sayo ngeembotyi ze-fava kunye ne-Chianti enhle. "
Igatya elixhomekeke kuyo liqela lamagama aqala ngesivakalisi esithandanayo okanye ngokubambisana. Isigatshana esithembekileyo sinesihloko kunye nesenzi kodwa (ngokungafani nesigatya esizimeleyo) asikwazi ukuma yedwa njengesigwebo. Kwakhona kwaziwa njengesiqendu esingaphantsi.
(Jonga kwakhona: Ukwakha izivakalisi kunye nezigaba ze-Adverb .)
"Musa ukuphikisana nenja enkulu [ icandelo elizimeleyo ], kuba inja enkulu ihlala ilungile [ isigxina esisekelwe phantsi ]."
Into e ngqo
Into echanekileyo sisibizo okanye isigammeli esamkela isenzo sesenzi esicatshulwayo .
"Ubomi bam bendimelwe ndilwe." Kwafuneka ndilwe nobawo .
(USophia kwi -Color Color , 1985)
Isivakalisi esilumkiso sivakalisi esibonisa iimvakalelo ezinamandla ngokumemeza .
" Thixo! Khangela loo nto! Uya kuhamba ngqo! "
(UJack Dawson ekhangele ekhayeni likaRose kwiTitanic , ngo-1997)
Isivakalisi esibalulekileyo sivakalisi esinika iingcebiso okanye imiyalelo okanye esibonisa isicelo okanye umyalelo.
" Thumela le ndyikitya yokufa, i-traitor, inkomo yenkomo, isicatshulwa esicwebileyo kwi-brig. "
Igatya elizimeleyo liqela lamazwi akhiwe ngesihloko kunye nesigidimi. Igatya elizimeleyo (ngokungafani nesigatshana esithembekileyo) sinokuma yedwa njengesigwebo. Yaziwa nangokuthi ligatya eliphambili .
Into engekho ngqo
Into engangqaliyo ibinzana okanye isigamagama esichazela ukuba ngubani okanye isenzo sesenzi kwisigwebo sisenziwa.
(Qwalasela kwakhona: Qalisa ukuSebenzisa izinto ezingekho ngqo .)
"Ulungele, Jerry? Ndifuna ukuqinisekisa ukuba ulungele, mzalwana. Nantsi into: Ndibonise imali ."
(Rod Tidwell kuJerry McGuire kuJerry McGuire , 1996)
Isivakalisi sokubuza isigwebo sibuza umbuzo.
(Jonga kwakhona: Yenza umsebenzi wokuPhumela izivakalisi .
" Liliphi igama lehashe lomshana kaLone Ranger? "
(UMnu Parker kwiNdaba yeKrisimesi , ngo-1983)
Isibizo siyinxalenye yentetho esetyenziselwa ukubiza umntu, indawo, into, umgangatho, okanye isenzo kwaye inokusebenza njengesihloko okanye into yesenzi, into ebhalwe ngaphambili , okanye into ehambelana nayo .
(Jonga kwakhona: Yenza umsebenzi ekuchoneni iNoun .)
" Umlindi , kukho ipilisi eninzi kwipaprikashi yam."
(UHarry Burns ngoHarry Met Sally , 1989)
Izwi elincinci luhlobo lwesigwebo okanye isigatya apho isihloko sifumana isenzo sesenzi. Ukwahlula ngezwi elisebenzayo .
"Naliphi na umzamo okwenza umoyiko wesaba kunye nokuphazamiseka phakathi kwabantu kufuneka kuthathwe ngathi sisenzo sovuko."
(Umdala wokuqala kuJor-El eSuperman , ngo-1978)
Isiqendu esinye seziqendu ezibini zesigwebo okanye isigatya, ukuguqula isihloko kunye nesenzi, izinto, okanye amabinzana alawulwa ngesenzi.
(Jonga kwakhona: Iyintoni isigidimi? )
"Andiyi khumbula ukuba ndivukile ."
(Thelma Dickinson eThelma noLouise , ngo-1991)
Ibinzana elikhankanyiweyo liqela lamazwi akhiwe ngumboniso , into yalo, kunye nayiphi na into yokuguqula into .
(Qaphela kwakhona: Ukongeza iiNgcaciso eziPhambili kwiCandelo leSigqeba esiSisiseko .)
Ngethuba elidlulileyo, ukhokho wethu uPaikea weza kule ndawo emva komnxeba . Ukususela ngoko, kwizizukulwana zentsapho yam , unyana wokuqala wokuzalwa uye wathwala igama lakhe waza waba yinkokheli yesizwe sethu . "
(Paikea kwiWhale Rider , 2002)
Isivakalisi igama elithatha indawo yesabizo.
(Qaphela kwakhona: Ukusebenzisa iifom ezahlukeneyo zeeNgxelo .)
"I-taker taker yazama ukumvavanya. Ndadla isibindi sayo ngeembotyi ze-fava kunye ne-Chianti enhle."
Isivakalisi lizwi okanye (ngokuqhelekileyo) iqela lamagama achaza ingcamango epheleleyo. Ngokuqhelekileyo, isivakalisi siquka isifundo kunye nesenzi. Iqala ngetekisi enkulu kwaye iphetha ngeempawu zokugqibela .
(Qwalasela kwakhona: Ukuzivocavoca ekuKhankeni izivakalisi ngokuSebenza .)
" Andiyi khumbula ukuba ndivukile. "
Isivakalisi esilula sisivakalisi sinomhlathi owodwa ozimele (owaziwa njengesiqendu esinqununu).
" Ndadla isibindi sakhe ngeembotyi kunye neChianti enhle. "
Isifundo siyinxalenye yesigwebo esibonisa ukuba kuthekani.
(Jonga kwakhona: Yiyiphi Isihloko sesigwebo? )
" Andiyi khumbula ukuba ndivukile."
Ixesha lixesha lesenzi isenzo okanye isimo salo, njengexesha elidlulileyo , langoku kunye nekamva .
(Qaphela kwakhona: Ukwenza Ixesha elidlulileyo lamaLwimi .)
"Kwiminyaka edlulileyo, wakhonza [ ixesha elidlulileyo ] ubawo kwiiClone War; ngoku ucela [ufike ixesha ] ukuba umncede emzabalazweni wakhe."
(Princess Leia ku General General Kenobi kwi Star Wars Isiqephu se-IV: Ithemba elitsha , 1977)
Isenzi siyinxalenye yentetho echaza intshukumo okanye ukuvela okanye ibonisa isimo salo.
(Qaphela kwakhona: Imibuzo elishumi ekhawulezayo kunye neempendulo malunga neetenzi kunye nezenzi zesiNgesi .)
" Thumela le ndyikitya yokufa, i-traitor, inkomo yenkomo, isicatshulwa esicwebileyo kwi-brig."
Ukuqonda amagama atshabalala ngesiNgesi ngegrama
I-West African Pidgin Xhosa (WAPE)
Uyihlela njani i-Essay?
Inkcazo yoLwakhiwo olunzulu
IYunithi yeeT kunye neeLwimi
Inkcazo kunye neMimiselo yeeVandi zeDynamic
I-Sophist yakudala yaseGrisi
Abaqeqeshi abaPhambili kwiMbali yeNBA
Iirekhodi zokuBhaliswa kweWadi yeWWII
35 Ukuhleka Kwamahlaya Asemini Ngomhla NgeHillary Clinton
3 I-Digit Addition Worksheets (Akukho Régrouping)
Imfazwe yamaRos: Imfazwe yaseStoke Field
5 Abahlabeleli beJazz abangalibalekiyo abaye bafaka iiBig Big
John Adams Fast Facts
Indlela yokuhlaziya i-Guitar yakho kwiDrop D
Abafazi be-Unitarian kunye ne-Universalist
Imvelaphi yeengcamango zobomi
Ukubaluleka kweBagpipes kwiMingcwabo
20 I-Halloween I-Pinterest ihlulekayo
Imfazwe yaseMogadishu: Blackhawk Down
Funda Indlela Yokuthi 'Ndiyakuthanda' ngesiJapane
I-Biography esifutshane kaHugo de Vries
Okwenene okanye ama-sponges angama-Artificial: Yiyiphi engcono kwiNgqongileyo?
IYunivesithi yaseTexas eArgin Admissions
"Ummiselo" Iifayile zeBhodi
IYunivesithi yaseTexas e-El Paso Admissions
I-Duck-Billed Dinosaur Imifanekiso kunye neeprofayili
Ukwabiwa kunye noBalo base-US
Uphi na nini i-Lady Gaga yazalwa?
10 Iintlobo ezininzi ezithandwa nguVincent van Gogh